Taorian’ny firaketana an-tsoratra momba ny fakàna tany tao anatin’ny toerana natao ho azy ireo, 18 ireo tompontany mpitarika sy mainty hoditra naiditra am-ponja ao Nikaragoà · Global Voices teny Malagasy
Mbola voatazona any aloha hatreto ny filoha mpitarika ireo indizeny
Voadika ny 29 Septambra 2020 6:50 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, Français, Esperanto , English
Printsesa Barberena miaraka amin'ireo Kriol hafa mpikambana ao amin'ilay vondrompiarahamonina. Sary nopihan'ny mpanoratra tamin'ny Novambra 2019.
Printsesa Barberena, Kriol mainty hoditra mpiaro tontolo iainana no sady mpikatroka mpiaro vehivavy avy ao Nikaragoà, notazonin'ny tafika nikaragoaiàna tamin'ny 27 Septambra, niaraka tamin'i Roger Joseph, Kriol mpiambina ala sy ireo 16 hafa Kriol sady olona mpitarika teratany, mpisolovava, ary mpiambina ala avy amin'ny vondrompiarahamonina indizeny Rama-Kriol. Notazonina tao aminà trano iray akaikin'ny Boca de Sabalos, any atsimo-atsinanan'ny faritr'i Nikaragoà ireo mpikatroka 18 ireo, ary 17 no navotsotra taty aoriana kely iny alina iny ihany. Nalain'ny tafika i Jaime McCrea Williams, filohan'ny governemantam-paritry ny Rama sy ny Kriol, ary tsy mbola hita hatramin'izao. Araka ny nambaran'ilay mpanao gazety Gerall Chavez, voalaza fa nalaina hanaovana fanadihadiana any Boca de Sabalos i McCrea.
Tsy nomena an'ireo mpitarika Rama sy Kriol ny fahafahan-dry zareo rehefa nanao fandraketana an-tsoratra ny fiharatsian'ny tontolo iainana sy ny fakàna tany ao amin'ny Indio Maiz Biological Reserve izay natao ho faritra natokana hitoerany ry zareo, araka ny nambaran'ilay ONG ao an-toerana Fundacion del Rio mpiaro tontolo iainana. 70 isanjato amin'ilay faritra voatokana no an'ireo Rama sy Kriol ara-dalàna, izay nanomboka tamin'ny 2002 no efa manana zo pôtilika momba ilay faritany misy azy ireo. Indio Maiz dia iray amin'ireo valanjavaboary roa manokana ao Nikaragoà neken'ny UNESCO noho ireo harena isankarazany ananany. Zava-dehibe izy io ho an'ilay Lalantsara Biolojika MezoAmerikàna. Hatramin'ny 2015, ireo Kriol sy Rama nampiana-tena ho mpiambina ala no manara-maso ny fahapotehan'ny ala sy ny fangalarana tany ao anatin'ilay valanjavaboary biolojika, satria lasa zara raha misy ireo mpiambina avy amin'ny fanjakàna.
Tao Nikaragoà, tato anatin'ny taompolo farany dia tsy nitsahatra nitombo ny tsindry mahazo ireo vondrompiarahamonina teratany, mizaka tena sy ireo taranaka afrikàna ao amin'ny morontsiraka karaibiàna. Niomanan'ny filoha Daniel Ortega ny hahazo fampiasambola avy amin'ilay orinasa shinoa HKND hanorina lakandrano lehibe iray mampifandray ranomasina roa ary hamakivaky an'i Nikaragoà, izay hisy ampahany voahitsaka amin'izany ny tanin'ireo vahoaka teratany. Nidona tamina fanoherana midadasika be avy amin'ny vahoaka sy nataon'ireo vondrompiarahamonina indizeny izany. Matoritory aloha izao ilay drafitra saika hanao lakandrano lehibe, saingy ho an'ireo mpisolovava, ireo manampahaizana ary ireo vahoaka Rama sy Kriol, mponina ao an-toerana, io no antony manazava ny toa tsy fahavitan'ny fitondran'i Daniel Ortega mampiato ny fandripahana ala ao anatin'ilay valanjavaboary. Ireo Voanjo tonga ao dia mpamboly, mpitrandraka harena ankibon'ny tany sy kristiàna mpiompy izay mametraka ny andiam-bibiny, manorina vondrompiarahamonina, mivarotra tany amina hektara, na mikaroka tahiry natoraly ho amidy. Teo anelanelan'ny 2000 sy 2018, 52% isanjaton'ny hazo nandrakotra azy no nafoin‘i Indio Maiz. Tamin'ny 2017, nampitandrina ilay ONG nikaragoaiàna mpiaro tontolo iainana “Centro Humboldt” fa raha mitohy ny fandripahana ny ala ao amin'io toerana io, fonga any ala ao Nikaragoà amin'ny taona 2028.
Kriol mpiambina ala. Sary nopihan'ny mpanoratra tamin'ny Novambra 2019.
Nanomboka tamin'ny 2018, nohenjanin'ny governemantan'i Ortega ny famoretana ataony an'ireo mpanohitra ara-pôlitika sy ireo ONG. Nandritra ireo hetsipanoherana ny governemanta, nihoatra ny 300 no isan'ireo tanora lavon‘ny bala natifitry ny tafi-panjakana mpandrava korontana sy ireo hery ivelan'ny tafika. Voampanga ho nahavita heloka bevava tamin'ny zanak'olombelona i Daniel Ortega. Hatreto, mihoatra ny 50 ireo mpanao gazety no nandositra niala ny firenena ary 86 ireo mpikatroka ho an'ny demaokrasia sy mpikambana avy amin'ny fanoherana pôlitika no any am-ponja, efa ho taona iray taorian'ny namotsorana ireo gadra pôlitika niisa 96. Marobe no voalaza fa niaritra fampijaliana tany am-ponja tao Nikaragoà.
Nahazo ny zo araka ny lalàna momba ny taniny ireo vondrompiarahamonina teratany sy Kiriolona tao Nikaragoà, tamin'ny alàlan'ilay Lalàna 445 tamin'ny 2002, izay mamaritra ny fizakàna ara-pananan-dry zareo ao anatin'ny fiarahamoniny. Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, hazavain'ny Printsesa Barberena amin'ny mpitarika ny tobin-tafika fa ananan-dry zareo ny zo araka ny lalàna momba ny taininy. Nandritra ny fitazonana azy ireo no nanaovany izany.
Toy izao no fomba nahatongavan'ilay lehiben'ny tobin-tafika tao amin'ilay vondrompiarahamonina teratany, voahodidina miaramila marobe, niaraka tamin'ny basilava AK mba hampirohoroho ireo filoha mpitarika ny vahoaka teratany nanandrana ny handrakitra an-tsoratra ireo fidirana an-keriny ao amin'ny tanin-dry zareo, izay ny FLSN no mpamporisika azy. pic.twitter.com/coxwDnhZYA
Nangatahan'i Barberena sy ireo vehivavy afro-indizeny hafa ireo miaramila tsy hanondro ny vavabasiny AK-47 any amin'i Jaime Williams filohan-dry zareo indizeny, tamin'ny fotoana nakàn-dry zareo azy. Araka ny tatitra nivoaka an-gazety taoriana kely, navoakan'ny tafika nikaragoaiàna, fisavàna mahazatra ihany ilay notanterahan'ny tafika mitam-piadiana tamin'ireo olona mivezivezy ao anatin'ilay faritry ny valanjavaboary.
Nisy andian-tafika Sandinista [tafiky ny governemantan'i Daniel Ortega, mpitarika ny antoko Sandinista] nàka ho takalonaina an'ireo mpitarika ny vahoaka teratany tao amin'ny governemantam-paritra Rama Kriol. Eto dia afaka hitanao ny fitondrantena feno herisetra asehon'ireo miaramila manondro ny vavabasiny AK-47 any amin'ilay lehilahy mitondra tànam-polo sy tsy maneho fihetsika fanoherana na kely aza.